बच्चालाई आमाबाबुसँगै सुताउने कि छुट्टै ? – ramechhapkhabar.com
सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ, बच्चालाई राति सुत्ने समयमा आमा बाबुसँगै सुताउने कि छुट्टै सुताउने ? गाउँघरमा बच्चालाई सँगै सुताउनुहुन्न भन्नेमा एउटा चर्चित उक्ति नै छ । विशेषगरी गाउँघरमा आमाबाबुको बीचमा बच्चालाई कहिलै पनि सुताउनुहुन्न भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर सहरी भेगमा यसबारेमा खासै चासो दिएको पाइँदैन ।
बच्चालाई एक्लै सुताउने बानी बच्चैदेखि बनाउँदै लैजानु आमाको लागि मात्रै नभएर बच्चाको लागि समेत फाइदाजनक मानिन्छ । बच्चालाई सानैदेखि अलगै बनाउँदा उसले आफ्नो कोठालाई सुन्दर बनाउन आफ्नै किसिमले सोच्ने गर्छ । जस्तो, कुन ठाउँमा पढाइको टेबुल राख्ने कहाँ सुत्ने भन्ने व्यवस्थापन गर्न होस् या त कोठा सफा गर्न पनि सानै उमेरदेखि सिक्ने गर्छ । रातमा सुत्ने समयमा यदि आन्तरिक कोठा छ भने त्यस्तो कोठा कहिलै बन्द नगर्नुहोस् । भित्री कोठा छैन भने बाहिरी कोठा पनि सम्भव भएसम्म खुला राख्नुपर्छ । ताकि बच्चालाई परेको समस्या समाधान गर्न सकियोस् र बच्चाप्रति नकारात्मक सोचाइ नआओस् ।